Voasambotra ireo namono ny mpiambina roa lahy: mpiasan’ny Gastro Pizza ihany ny iray amin’ireo efatra tratra | NewsMada
Voasambotra ireo namono ny mpiambina roa lahy: mpiasan’ny Gastro Pizza ihany ny iray amin’ireo efatra tratra
11 andro aty aorian’ilay vonoan’olona nahafaty ireo mpiambina roa lahy tao amin’ny Gastro Pizza, eny By-Pass, voasambotry ny polisy ireo jiolahy efatra tompon’antoka tamin’izany. Tsy hafa fa mpiasan’ny Gastro Pizza ihany ny iray amin’izy ireo.
Voasambotra tamin’ny fanafihana ny Gastro Pizza By Pass ny olona efatra, tamin’ny nahafatesana mpiambina roa. Fantatra fa tratra omaly ny roa, ary natao omaly ihany ny famerenana ny zava-nitranga. Araka ny loharanom-baovao, mpiasa taloha tao amin’ny Gastro ihany ny iray amin’ireo jiolahy. Mbola misy ihany koa ny olona hafa karohina manodidina ity fanafihana ity. Karohina ihany koa ny fitaovana nampiasain’ireo olon-dratsy ireo, toy ny basy, sns. Misy ihany koa ny “camera” nalain’izy ireo, nandritra ny fanafihana. Voaraikitra ao anatin’io ny zavatra nataon’ireto jiolahy ireto, nandritra ny fanafihana. Na izany aza, efa nisy ny famerenana ny fomba nanafihana sy namonoan’izy ireo ny mpiambina roa lahy. Ny nitifirana azy ireo sy ny nidirana tao anatin’ny Gastro.
Raha tsiahivina, nitranga ny 26 hifoha 27 aogositra ny fanafihana ka nitifiran’ireo jiolahy ny mpiambina roa teo an-toerana. Maty tsy tra-drano izy roa lahy. Nilaza ny tale jeneralin’ny Gastro Pizza, ny chef Mbinina, fa mpiasa tao taloha ihany ny miray tendro amin’ny jiolahy. “Anisan’ny antony nangalaran’izy ireo ny “caméra de surveillance” izany. Mahafantatra tsara ny fomba fiasa sy ny pitsopitsony ao amin’ny orinasa ireo jiolahy”, hoy ny chef Mbinina. Nanamafy izany ny fahatraran’ny polisy ny iray, ilay mpiasa taloha tao amin’ny Gastro ihany.
Mbola maro ny vokatry ny fanadihadiana momba ity fanafihana ity. Ny firaisana tsikombakomba, ny basy nampiasaina, sns. Hisy ny fanazavana ataon’ny polisin’ny BC Anosy, nandray an-tanana ny raharaha anio. Efa nahitam-bokany aloha ny fanadihadiana lalina, saingy miandry zavatra maro ny mpanara-baovao. Atolotra ny fampanoavana anio ihany koa izy efa-dahy ireo.
Miandry vokatra tsara
Anisan’ny andrasan’ny maro ny momba ny fiparitahan’ny basy amin’ny trangam-panafihana tahaka ity teny amin’ny Gastro ity. Avy aiza ihany ny basy ampiasain’ny jiolahy? Azo antoka fa basy mitovy amin’ny an’ny mpitandro filaminana ny tany amin’ireto jiolahy ireto. Efa re hatrany ny fisian’ny mpitandro filaminana mampanofa basy na mivarotra basy, saingy tsy tratra hatrany izy ireo. Iza ireo olona ireo?
Andrasana ihany koa ny paik’ady amin’ny ady amin’ny asan-jiolahy. Efa nanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety ny zandary ny amin’ny ady amin’ny tsy fandriampahalemana amin’izao ankatoky ny fifidianana izao. Miandry ny avy amin’ny polisy kosa ny rehetra. Mirongatra ny fanafihana, ny fanendahana, sns. Misy ny tratra ireto kanefa mbola maro ny miriaria any ireo jiolahy. Mandry an-driran’antsy ny olona ka miandradra vokatra tsara sy fanomezan-toky avy amin’ny mpitandro filaminana.